NepalUpclose.com - eKantipur - संकट निकासका लागि दलहरूबीच संवाद
eKantipur - संकट निकासका लागि दलहरूबीच संवाद
संविधानसभाको विघटनपछि दलहरूबीच उत्पन्न अविश्वास हटाउँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन र संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने छलफल थाल्न माओवादी र कांग्रेस सहमत
भएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सोमबार वार्ता गरी मंगलबार नै तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठक बोलाएर छलफल अघि बढाउने सहमति गरेका हुन् ।
कांग्रेस सभापति कोइरालाले तीन दल र मोर्चाको बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, बजेट र संविधानका विषयमा समेत छलफल सुरु हुने बताए । जेठ १४ पछि राजनीतिक दलहरूबीचको संवादहीन अवस्था अन्त्य गर्न कांग्रेसले यसअघिसमेत तीन दल र मोर्चाको बैठक राखेको थियो । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा मंगलबार दोस्रो बैठक बस्न लागेको हो ।
'उग्रवामपन्थी' र 'उग्रदक्षिणपन्थी' हावी भएर मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा जाने खतरा देखेको भन्दै कोइरालाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । उनले सहमति छाडेर सरकार लम्ब्याउने दिशामा मात्रै केन्दि्रत नहुन दाहालसँग विशेष आग्रहसमेत गरे । स्रोतका अनुसार भेटवार्तामा दाहाल पनि सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए ।
विवादित विषयमा सहमति कायम गरेर मुलुकलाई निकास दिन एकीकृत माओवादी र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू तयार भएका छन् । दुई ठूला राजनीतिक दलका प्रमुखहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, संविधानका विवादित विषयका साथै नयाँ निर्वाचन वा अन्य कुन प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति खोज्न सक्रिय भएका हुन् ।
दलहरूको सहमतिमा नै बजेट ल्याउने विषयमा पनि मा
राष्ट्रपति सक्रिय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव विद्यमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि सक्रिय रुपमा भेटघाटमा लाग्नुभएको छ।
वर्तमान सरकारलाई कामचलाउ भएको घोषणा गरिसक्नुभएका राष्ट्रपति डा. यादवले दलहरूबीच तत्काल सहमति हुनुपर्छ भन्दै भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको हो।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेको भोलिपल्ट सोमबार नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालास“ग उह
'प्याकेजमै सहमति गरौँ'
काठमाडौँ, असार १८ गते। सत्तारूढ दलहरूले संविधान लेखनको विषयमा विवादित रहेका विषय राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भए संविधानसभा पुनस्र्थापनाबारे सकारात्मक ढङ्गबाट छलफल गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा र नेकपा -एमाले)का अशोक राईको अप्रत्यक्ष चासोमा ती पार्टीभित्रै संविधानसभा पुनस्र्थापनाबारे पहल भइरहेका बेला सत्तारूढ एमाओवाद
तीन दल र मोर्चाको संयुक्त बैठक बस्न सकेन
काठमाडौ, असार १९ - जारी राजनीतिक गतिरोधमा सहमति खोज्न मंगलबार बस्ने भनिएको चार राजनीतिक शक्तिको बैठक स्थगित भएको छ । एमालेले आफूलाई पूर्व जानकारी नदिई बोलाइएको बैठकमा उपस्थित नहुने जनाएपछि बिहान ८ बजे बोलाइएको बैठक बस्न नसकेको हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालबीच सोमबार भएको व
संयुक्त धारणा बनाउँदै विपक्षी गठबन्धन
काठमाडौं, असार १८ (नागरिक)- पूर्ण बजेटको विरोधमा रहेका विपक्षी गठबन्धन दलहरुको बैठक एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा सुरु भएको छ। बैठकपछि विपक्षी गठबन्धनले बजेट बारे संयुक्त आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछन्। बैठकमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, राजपा, नेकपा माले लगायत २७ दल सहभागी छन्।